Kugamuchirwa, Kukurumidza, Kuwedzera | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 15, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Muverengi aripo pa Blog World Expo akandiudza kuti zuva raive kurasikirwa pasina kusara kwemutauri mumwe. Scott Stratten. Scott achangobva kuburitswa UnMarketing, bhuku randaive, zvinosetsa, ndichiverenga munzira yekuLas Vegas. Iyi ndiyo yangu yekutanga Blog World Expo, saka ini handikwanise kutaura kuti yakakura sei - kunze kwekunge ndatoita zvisingaite network yekubatana uye ndikaita hurukuro huru naScott kekutanga (uye kechipiri nguva) ndakamhanyira maari.
Scott anorarama maererano nebhuku rake… mukutaura kwake, mharidzo yake uye nebhuku racho pacharo. Scott anoidaidza iyo Unbook. Izvo zvitsauko zvipfupi uye zviri nyore kugaya. Pane nzira yekutaurirana kubhuku. Uye kana uchinge waverenga rugwaro rwekutanga, unenge uchisekerera… uchiverenga zvinyorwa zvese zvinotevera mushure. Iyo inofanirwa kuverenga.
Kunyangwe ini ndisati ndapedza nebhuku, ini ndinototenda kugona kwaScott kwekusanyanyisa kurerutsa mabasa aripo kune vatengesi - kunyanya kana zvasvika pakushandisa midhiya yenhau. Ndinoona kuti vazhinji vevatauri vepamusoro, vanyori uye vanopa mazano vanokwanisa kuzviita, Scott anogona kunge ari mumwe weakanakisa. Ivo vanokwanisa kutarisa kure kubva kune ruzha rwese uye kutarisisa pazvinhu chaizvo.
Imwe yenyaya iri mubhuku yaive yakapfupikiswa yekuti makambani anoshandisa sei zvemagariro enhau… zvikamu zvitatu zvakapusa. Ndiri kuzowedzera masendi angu maviri pane imwe neimwe - haazi mazwi aScott.
toredzera - Kutora chimwe chinhu chine simba senge pasocial media kunogona kutyisa pamwe nekubata-basa. Kuyera mhedzisiro kunogona kurwadza kwazvo. Nekuda kweizvozvo, makambani mazhinji akasiya vezvenhau zvachose pachinzvimbo chekunyatsoziva kugona kwayo kwekuvaka izwi remuromo, chiremera, mukurumbira uye bhizinesi rinotevera… kungave kunanga kana kuburikidza nekutumira.
tichimhanya - Ukangoona izvo zviri kunyatso kushanda (apa ndipo pazano rakanaka kushandisa iyo wezvemagariro media consultant… Vakabata makumbo avo kumoto pamhedzisiro), danho rinotevera rinogona kunge riri rinotora nguva. Zvemagariro venhau haisi sprint… imarathon. Zvinotora nguva kune iyo ebbs uye kuyerera kwemasocial network uye blogosphere kuti ikucherechedze iwe uye kuti iwe ukure. Kuregererwa kwakajairikawo pano. Nzvimbo inokwikwidza zvakanyanya munzanga midhiya inogona kutora mwedzi kana kunyangwe gore kana maviri kupaza nezvakanaka zvemukati. Usarase saiti yezvinangwa zvako uye gara uri mugwara!
kuwedzera - iyi ndipo painonakidzwa. Iwe wagogodza pasi mashoma mashoma neako zano uye ikozvino iwe unongofanirwa kuuya nemasvikiro matsva, vateereri vatsva uye mazano matsva ekuita. Uri kutowana mhedzisiro ... mukuru wako anofara… sangano ratenga mumasocial media uye uriko kukohwa mabhenefiti. Tsika yesangano rako iri kutochinja kubva mukati-kunze apo iwe uchiona pachena kuchifadza. Vashandi vako vari mukutarisa, vari kubatsira uye vari kufara. Uye fan fan yako uye zvinotevera zviri kukura padanho rinokurumidza.
Tora kopi ye UnMarketing nekukurumidza sezvaunogona. Haisi yako yepakati bhuku rekushambadzira izere nezviri pachena. Scott anokurudzira makambani kutora (smart) njodzi pane kuwana mhedzisiro inotyisa nekuchengetedzeka uye zvakajairika kushambadzira. Rega Kushambadzira. Tanga Kuita.
Tags: kutorablog nyika expoKuwedzeratichimhanyakuitamba yakachengetekangoziscott strattenunmarketing